नौमती र पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुट्दै युवा | suryakhabar.com
आज वडादशैंको सातौं दिनः घरघरमा फूलपाती भित्र्याई मनाईदै
बलात्कारको अभियोग लागेका निलम्बित सभामुख महरा प्रकरण सामसुङ पर्न खोजे अनिष्टः गगन थापा
धर्म/संस्कृति रक्षाका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ, म पनि सकेसम्म लाग्छुः नेतृ देउवा
Home पर्यटन/संस्कृति नौमती र पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुट्दै युवा
on: June 20, 2019 In: पर्यटन/संस्कृतिTags: No Comments
मुग्लिन । विवाह व्रतबन्ध पूजालगायत शुभकार्यमा बजाउने परम्परागत नौमती र पञ्चेबाजा पछिल्लो समय लोप हुँदै गएपछि चितवनका युवाहरु यसको संरक्षणमा जुटेका छन् । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ स्याङ्दीका आदिवासी जनजाति समुदायका १५ युवा समूह नै गठन गरी नौमती र पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुटेका हुन् ।
विशेषगरी दलित समुदायले पछिल्लो समय नौमती पञ्चेबाजा बजाउन छाड्दै गएकाले यसको संरक्षणका लागि बाजा बजाउन शुरु गरिएको नयाँबारी साङ्केतिक समूहका अध्यक्ष रामलाल तामाङले बताए । तामाङले भने, “पछिल्लो समय दलित समुदायले गाउँघरमा नौमती पञ्चेबाजा बजाउन छाड्दै गएको छ, गाउँमा विवाहव्रतबन्ध पूजालगायत शुभकार्यमा बाजा बजाउने समूहको अभाव भएको छ, त्यसैले यसको अभाव परिपूर्ति गर्न र संस्कृतिको जगेर्नाका लागि हामी जुटेका हौँ ।”
एक वर्षदेखि बाजा बजाउँदै आएको समूहमा तामाङ, गुरुङ र मगर जातिका युवा रहेको अध्यक्ष तामाङले बताए । अहिले आफ्नो समूहलाई बाजा बजाउनका लागि धेरै ठाउँबाट बोलाउने हुँदा भ्याउनै मुस्किल परेको उनको भनाइ छ । लोप हुनलागेको पञ्चेबाजाको संरक्षणमा जुटेर नमूनाकार्य गरेको भन्दै गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले बताए । गाउँपालिकाले प्रोत्साहनका लागि समूहलाई बाजा खरीद तथा पोशाकका लागि सहयोग गर्ने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।
पहिले–पहिले नेपाली समाजमा शुभविवाह, व्रतबन्ध, पूजाजस्ता शुभकार्यमा नौमती पञ्चेबाजा अनिवार्यजस्तै बजाउने गरिन्थ्यो भने दलित समुदायले पेशाका रूपमा बजाउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय दलित समुदायले बजाउन छाड्दै जाँदा ती शुभकार्यमा नौमती पञ्चेबाजाको स्थान डेक र ड्रमबाजाले लिन थालेका थिए । तर पुनः नेपाली समुदायबीच शुभकार्यमा नौमती र पञ्चेबाजाको माग बढ्न थालेपछि अन्य समुदायकाले पनि यो बाजा बजाउन थालेका छन् ।
पूर्वखोलाले ग¥यो असल बुहारीलाई सम्मान
असोज २४ र २५ अन्तर्राष्ट्रिय तमु सम्मेलन हुने
मधुमेह, सुगर रोगका बिरामीले दशैमा कस्तो मासु खाने ? कति खाने ? डा.तिर्थलालको सल्लाह
सवारी साधनको जाँच तथा अनुगमन